Who were Bengali, so called Rohingya?: ငွေ(ဒေါ်လာ)မျက်နာကြည့် ပြီးမြန်မာလူမျိုး၁၃၅ လူမျိုးကိုBBC သတင်းဌါနမှစော်ကားလိုက်သည် ဟုတ်မဟုတ်ဤစာကိုဖတ်ပြီးဝေဖန်ရေးသားပေးကြပါ
ငွေ(ဒေါ်လာ)မျက်နာကြည့် ပြီးမြန်မာလူမျိုး၁၃၅ လူမျိုးကိုBBC သတင်းဌါနမှစော်ကားလိုက်သည် ဟုတ်မဟုတ်ဤစာကိုဖတ်ပြီးဝေဖန်ရေးသားပေးကြပါ
ဤစာသည် (၈-၁-၂၀၁၂) BBC မှ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆နာရီ ကျေးတမာနှင့်ပေဖူလွှာမှထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါသည်။
စာရေးပေးသူအမည်။ ။ အာရက္ခဒေသမှ ဘီဘီစီသောတရှင် သံကိုးမောင်း
ဘီဘီစီက ထုတ်လွှင့်ခဲ့ တဲ့သတင်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့အားပေးရေးသားခဲ့ သလို ပြီးခဲ တဲ့ဇန္န၀ါရီလ-၅-ရက်နေ့ က ဘီဘီစီက သတင်းတပုဒ် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ လို့ထောက်ပြဝေဖန် ရေးလားခဲ့ တဲ့စာကိုလဲ ကောက်နုတ်ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
အာရက္ခဒေသမှ ဘီဘီစီသောတရှင် သံကိုးမောင်း ရေးလာတဲ့စာထဲမှာ
နှစ်သစ်မှာ မဂ်လာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ ဆုမွန်တောင်းယင်း ဒီစာကို ရေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ။
ပြောချင်တာကတော့ ဒီကနေ့ -၅-ရက် ၁-လ- ၂၀၁၂ ရက်နေ့ မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ၀ီလျှံဟိတ် လာတယ်။ နှစ်-၅၀ အတွင်း ပထမဆုံးလာတယ် ပြောပါတယ်။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ နေပြည်တော်က သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ ပြီးတော့ ရန်ကုန်ကို ရောက်သွားတော့
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ တွေ နဲ့တွေ့ တယ်လို့ပြောတယ်။
၂၀၁၀-တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ တွေနဲ့တွေ့ ရာမှာ
သတင်းပို့ တဲ့ဘန်ကောက်ရုံးက နန်းချယ်ရီခမ်းက ရိုဟင်ဂျာပါတီလဲ ပါတယ်လို့ပြောသွားတာကြားလိုက် ရပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုကြားလိုက်တော့ ကျနော် အတော်ကြီးကို အံ့သြတုန်လှုပ်မိပါတယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိဘူးလို့အစိုးရက တရားဝင် ငြင်းပယ်ထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘင်္ဂလီမူဆလင် လူမျိုးတွေသာဖြစ်တယ်လို့အသိအမှတ် ပြုထားတယ်။သူတို့ ဟာ တိုင်းရင်းသားတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ လဲ ငြင်းပယ်ထားပါတယ်။
နောက်တချက် ပြောချင်တာက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာရော -၁၉၉၀- ရွေးကောက်ပွဲမှာပါ ရိုဟင်ဂျာပါတီဆိုတာ မပါခဲ့ ပါဘူး။
အခုမှ ရိုဟင်ဂျာပါတီဟာ ဘယ်လိုဖြင့် ပါဝင်လာရလဲ ဆိုတာ ကျနော်ဖြင့် နားမလည်နိုင်အောင်ပါဘဲ ။
ဖြေသူကျေးတမာပေဖူးလွှာ။။ ဟုတ်ကဲ့ ရှင်။ အဲဒီနေ့ က ဘီဘီစီရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်ချက်မှာ ဖေါ်ပြသုံးနှုံးခဲ့ တာဟာ အဲဒီအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့ တဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် တဦးရဲ့ရည်ညွှန်းသုံးနုံးချက်အတိုင်း နန်းချယ်၇ီခမ်းက ပြန်လည်တင်ပြခဲ့ တာသာဖြစ်ပါတယ်။
နောင်အခါမှာ ပိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အမည်နဲ့ဖေါ်ပြရာမှာ တိတိကျကျ ဖေါ်ပြပေးသွားပါမယ်။
အခုလို ထောက်ပြ ရေးလာတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ။
အဲဒီအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့ တဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် တဦးရဲ့ရည်ညွှန်းသုံးနုံးချက်အတိုင်း နန်းချယ်၇ီခမ်းက ပြန်လည်တင်ပြခဲ့ တာသာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပေမဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာပါတီ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမရှိဘူးဆိုတာမသိဘဲနှင့်သတင်းထောက်လုပ်နေတာတောမဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်
ငွေ(ဒေါ်လာ)မျက်နာကြည့်ပြီးသတင်းသမားတချို့ သတင်းလွင့်နေတေဆိုတာသိရှိပြီးသားပါ ဒေါ်နန်းချယ်ရီခမ်းသည်သတင်းသမားများဧ။်စည်းကမ်းကိုချိုးဖေါက်
၂။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာ မရှိသလို တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလည်း မဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်း တရားဝင်ထုတ်ပြောထားသလို ပြည်ထောင်စုဖွားတိုင်းရင်းသားတွေအားလုးံကလည်း လက်ခံထားကြ သိရှိထားကြပါတယ်။ဒီလိုမရှိတဲ့ဟာကို ဘီဘီစီလို သတင်းဌါနတွေက ဘာကြောင့်လွှင့်နေသလဲဆိုတာကို တွေးလေ အဖြေက ရှင်းလာလေပါပဲ။ဘီဘီစီဝန်ထမ်းတွေကို ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီးတော့ သမိုင်းလိမ်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်အောင် ဘင်္ဂလီတွေက ငွေပေးခိုင်းစားနေလို့ပါပဲ။ဘီဘီစီသတင်းဌါနဆိုတာ အများပြည်သူတွေ သတင်းမှန်ကို သိရှိဖို့ အတွက် ဖွဲ.စည်းထားတဲ့ သတင်းဌါနတစ်ခုလို့သိထားပါတယ်။အခုလက်တွေ.အမြင်အရ ကိုယ်ပိုင်သတင်းမီဒီယာ တစ်ခုလို သတင်းအချက်အလက် မှန်မှန် မမှန်မှန် လွှင့်ချင်သလို လွှင့်မယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း သတင်းဌါနလို ဖြစ်နေပါတယ်။
၃။ theintunmaung2009: ကမ္ဘာကျော်ဘီဘီစီသတင်းသမားတဦးအနေနှင့် ယခုလိုဒေါ်လာမျက်မှကိုကြည့်ပြီး သတင်းအမှားထုတ်လွှင့်ခြင်းမှာ သတင်းဥပဒေကိုချိုးဖေါက်ခဲ့သလို ရခိုင်လူမျိုးအပေါ်မှာတိုက်ရိုက် စော်ကားခဲ့ရာရောက်သလို တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုတွေကိုပါ မှေးမှိန်ရာရောက်ပါတယ်။
၄။ ramree: သူတို့ ဖြေကြားသွားတာက မဖြစ်နိုင်တဲ့ အဖြေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ မူဆလင် ကိုယ်စားလှယ် တက်ရောက်လို့လား။ တက်ရောက်ရင်တော့ မှားပြီးပြောတာ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် မူဆလင် ကိုယ်စားလှယ် မတက်ရောက်ဘဲ အခုလို ရိုဟင်ဂျာပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လို့ BBC က သုံးနှုန်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဟာ တမင်တကာ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြောဆိုလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တခုက ခုလို ရခိုင်ပါတီနှစ်ခုက ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦးတက်ရောက်တာကို သတင်းပို့တဲ့လူက မမြင်လို့လား။
၅။ယေကေ နန်းချယ်၇ိခမ်း ကိုရာ သတင်းထောက်လုပ်ကေ တတ်မှ လုပ်စော် ကောင်းရေ - ငတ်လို့လုပ်စော် မကောင်း။ လူမျိုးတမျိုးကို ဖေါ်ပြကေ ယင်းလူမျိုးဆိုစော် အမှန်တကယ် ရှိလားဆိုစော်ကို လူဝင်မှူကြီးကြပ်ရေး နင့် မှတ်ပုံတင်ဋ္ဌါန -သန်ကောင်စာရင်းဋ္ဌါန ရို့ ကို မီးရဖို့ - သတင်းတိကို အတည်ပြုချက် ရပြီးမှ ထုတ်လွှင့်ရဖို့စော်ကို နားမလည်လားဆိုပနာ ယင်းကလေ့မေကို စာ၇ီးဝေ-
၆။Neemun: ကျွန်တော့်နာမေ နီမင်းခိုင်ပါ ကျွန်တော်ရို့ အချေကပင် တခါမှ မကြားဖူးရေ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုစော် BBC က တရားမ၀င်ကြေငြာနိန်ခြင်းသည် မြန်မာတနိုင်ငံသားလုံးကို BBC က စော်ကားနိန်ရာရောက်တေပိုင် BBC သတင်းဠာနက မြန်မာအလုပ်သမားတိကို အပြောင်းအလှဲလုပ်သင့်ပါရေ မဟုတ်ပါက BBC ကို မြန်မာ အစိုးရအနိန်နန့် သမိုင်းလိမ်လည်မူနန့် တခုခုလုပ်သင်ရေလို့ မြင်ပါရေ
ရ။နန်းချယ်၇ီက ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်တာဟာ ဘယ်သူ့ ကို ဖြေရှင်းတာလဲ ။ ဒီလိုသတင်းကို လွှင့်ထုတ်ခဲ့ တဲ့သူတဦးအနေနဲ့ပစ္စလက်ခတ် ဖြေရှင်းတာကို ဘယ်လိုလက်ခံနိုင်မှာလဲ ။ နိုင်ငံတကာမှာ ဒီလူမျိုး မရှိဘူးဆိုတာကို ဆန္ဒပြတာ နန်းချယ်၇ီ သိကို သိခဲ့ ရမယ် ။ မသိဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီလိုဆိုရင် နန်းချယ်ရီက ဘာကြောင့် လွှင့်ထုတ်ခဲ့ ရသလဲ ။ ဘန်ကောက်မှာ ဦးဝင်းမြင့်က ကုလားဘဲ ။ ဒီကုလားက အလွှင့်တော့ နန်းချယ်ရီက ဒီသတင်းကို လွှင့်ထုတ်တာဖြစ်တယ်။ နန်းချယ်ရီပြောတဲ့တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တဦးရဲ့ပြောဆိုတာကို လွှင့်ထုတ်တာလို့ဖြေရှင်းတယ်။ ဒီလိုပြောတဲ့တိုင်းရင်းသားတဦးဆိုတာဟာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ဖြေရှင်းရပါလိမ့်မယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ၀ီလျှံဟိတ်နဲ့တွေ့ ဆုံခဲ့ ရာမှာ တက်ရောက်ခဲ့ တဲ့ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာ ဘယ်သူတွေ ပါတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ ဘီဘီစီ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ဒီလို လက်လွပ်စပယ် ဖြေရှင်းလွှင့်ထုတ်တာဟာ ရခိုင်လူမျိုး တခုလုံးကို စော်ကားတာသာဖြစ်တယ်။ အယင်က ဘီဘီစီကို ကြိုက်ခဲ့ ပေမဲ့ ခုတော့ ဘီဘီစီဆိုရင် ရခိုင်လူမျိုးက ပါးစပ်သန နားသနတယ်ဗျ ။ နန်ဒချယ်ရီးဟာ ကုလားမယားဖြစ်လို့ သာ ဒီလိုလွှင့်ထုတ်တာဖြစ်မယ်လို့ ထင်တယ်။ နောက်တခုက ဘီဘီစီသတင်းဋ္ဌါနမှာ သတင်းထောက်တွေကို မဟုတ်မဟတ်တာကိုများ ဘာကြောင့်ခန့်ထားသလဲဆိုတာ သိချင်တယ်။ မိုက်တလုံးကိုင်ပြီး ကြေညာတာနဲ့သတင်းထောက်လုပ်လို့ ရတယ်ဆိုရင် ဘန်ကောက်က အိမ်ဖေဒအလုပ်သမားတွေတောင် လုပ်တတ်တာပါ ။ ဒါကြောင့် နန်းချယ်ရီက ဒီကိစ္စကို ရခိုင်လူမျိုးတွေ ကြေနပ်အောင် ဒီအလုပ်က ထွက်သွားပေးဖို့လိုတယ်။ အရှက်သိက္ခာမရှိတဲ့ဘီဘီစီ သတင်းဋ္ဌါနဟာ ဒီလို အောက်တန်းကျတဲ့မိန်းမလည် သိန်းကြွယ်တွေနဲ့ရှိနေသမျ ချာတူးလန် အော့်ကြော့လန် ဖြစ်နေမှာပါဘဲ ။
မောင်ဖိုးထောင် ( ဘန်ကောက် )
၈။Aung: ဘီဘီစီ အနေနဲ့ လူ့အခွင့် အရေးကို ဦးစားပေးသလိုမျိုးနဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ ပြဿနာတွေ တက်လာအောင် မရှိတာကို အရှိလုပ်ပြီး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နေတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကိုကျတော့ ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်ပြီး ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းနဲ့ တခြားဒေသတွေမှာ နေတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကို ဘာကြောင့် ရိုဟင်ဂျာလို့ မခေါ်ကြတာလဲ။ ရိုဟင်ဂျာ ပါတီဆိုပြီးနာမည်နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ရှိမရှိ ကိုလဲ ဘီဘီစီ မသိလို့လား၊ သိယင်းနဲ့ တမင်ကို လုပ်ကြံပြောနေတာလား။ အမှိုက်ကစ ပြသဒ်မီးလောင်မယ့် လုပ်ရပ်မျိုး ဘီဘီစီ အနေနဲ့ မလုပ်သင့် ပါဘူး။
၉။hlanyunt1146: ရိုဟင်ဂျာပါတီလို.က မဟိစွာ အားလုံးသူအသိပါရာ
ယင်း ဘီဘီဆီ က ၀န်ထမ်းတိ ဖေးသာယူပါနာ လုပ်နိန်ကတ်စွာ ပြသနာပါရာ
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 11:50 AM
တစ်ကြိမ်မှားတုန်းက လွဲချော်သလို မသိသလိုနဲ့ စော်ကားမှုကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ၊ နှစ်ကြိမ် မှား က .. တမင် ကြံစည်စော်ကားမှု ကို ပိုပြီး အေ၇ာင်ခြယ် ပြလိုက်ပြီ ။ ကဲ ဒို့တိုင်းရင်းသားတွေ ... ဒီလို ပဲ နှုတ်ပိတ် ၊ လက်ပိုက် ကြည့်နေဦးမလား ။ နောက်ဆို၇င် .. အဲဒီ ဘင်္ဂလီမူဆလင်တွေ က ဘုန်းကြီးခေါင်း ပေါ် ချီးတက်ပါချ လိမ့်မယ် ။
ဘင်္ဂလီမူဆလင်တွေ က ဘုန်းကြီးခေါင်း ပေါ် ချီးတက်ပါချ လိမ့်မယ် ။ Great,agood adviser to Buddhist .. these monks are already played as footballs in Yangon by the same Buddhist. protect yourself first, then go to other step.BBC have more information better than you about Rohingya,don't bark more....
Pao Wyne said...
2012 အထိ မြန်မာပြည်ကို ဆက်လက်စော်ကားနေဦးမယ်ဆိုတာကို BBC က စစ်ကြေငြာလိုက်တာပါပဲ ။
Death to BBC
ခင်ဗျားတို့ ဘင်္ဂလီကုလားတွေ ဗမာဟန်ဆောင် ရခိုင်ဟန်ဆောင် အမျိုးမျိုး ဟန်ဆောင်ပြီးတော့
မင်းတို့ ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် မရှက်ကြတာလဲကွာ...
ခွေးလိုးမသား ကုလားဆိုတော့ ခွေးမ၄ကောင်
ယူလို့ရမှာပေါ့ ငါတို့ကလူကွ လူ့အခွင့်ရေးရပြီးသား တောင်းစရာမလိုဘူး ငါတို့သမိုင်း ငါတို့ပြည်နယ်ရှိပြီးသား မင်းတို့လို စောက်ရှက်မရှိ
လူ့အဆင့်တန်းမမှီလို့ နိုင်ငံတကာမှာ လူ့အခွင့်ရေးတောင်းစရာမလိုဘူး၊ပြည်နယ်မရှိလို့တောင်းစရာမလိုဘူး မှတ်ပုံတင်ရဖို့ လ၀က ကို ဖင်ကုန်းစရာမလိုဘူး သဘောပေါက်လား ခွေးလိုးမသား
ခေါ်တောလီးကုလားဘင်ဂါလီ ကုလားစုတ် ကုလားဒိန် ကိုယ်မေကိုယ်လိုးတဲ့ လီးကုလားတွေရဲ့ မင်းတို့လို ဗလီမဆောက်ရ
လို့ သင်းချိုင်းကုန်းမှာ ဟာလာလုပ်စရာမလိုဘူး သဘောပေါက်သ လား စောက်ရှက်မရှိလို့ ကုလားဖြစ်ရတာ
သံဝေဂမရဘူး စောက်ဖုတ်ကို ဦးတိုက်သေး
တယ် ခွေးလထစ်ကို ခေါင်းမှာဆောင်းပြီး ကျက်သရေမရှိ သူများနိုင်ငံထဲ ခိုးဝင်သေးတယ် ၇၈၆ ဆိုတာ ၂၁ရာစုမှာ
တာကွ ခေါ်တောခွေးသခိုးတွေရဲ့ ဆဲရတာမောတယ် ခွေးကိုဆဲရင်တောင် ဒီလောက်မဆဲရဘူး ကုလားကို တော်တော်
ဆဲရတာပဲ ငါလိုးမသား ဘင်ဂါလီ မျိုးတွေရဲ့။
ငါဆဲတဲ့စာကို မင်းတို့လီးကုလား အချင်းချင်း လက်ဆင့်ကမ်းလိုက် ငါခဏခဏ မဆဲနိုင်ဘူး
BBC အမှုထမ်းတွေအပေါ် ဆဲဆိုရေးသား ရိုင်းစိုင်းတာ တွေရပ်ပေးကြပါ။BBC သည်မည်သူ့ကိုမှ သာစေ ၊ နာစေ
သဘောမထားပါ။၊မကျေနပ်ချက်တွေကို www.bbc burmese.com သို့ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါသည်။
မကျေနပ်ချက်တွေကို www.bbc burmese.com သို့ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါသည်။
သတင်းဆိုတာက ဟုတ်တာဘဲ တင်တယ် မဟုတ်လို့တာကိုမတင်ဘူးမပြောဘူး အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းတင်ပေနှိင်ပါတယ်
BBC မှာသမိုင်းမှတ်တမ်းရှိပါတယ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လန်ဒန်မှာ မစ္စတာ အက်တလီနဲ့ ဆွေးနွေးပြီး ၀မ်းသာစရာ သတင်းကို မြန်မာပြည်သားတွေ စောစောသိရအောင် BBC ကိုသွားခဲ့ပါတယ် BBC ကလဲလွှင့်ပေးမယ် ဒါပေမယ့် ဒါလေးကို ဖြုတ်ပေးပါ ဒါလေးကို ထည့်ပေးပါဆိုပြီး သတင်းမှန်ထဲမှာ လိုချင်တဲ့ ဆိုက်ဝါးလေးတွေထည့်ဖို့ ကြိုးပမ်းပါတယ် နောက်ဆုံး ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ဆိုးပြီး မလွှင့်ဖြစ်တော့ဘူး BBC VOA နားထောင်တဲ့ကောင်တွေ စောက်ရူးတွေ ချီးစားတဲ့ကောင်တွေ ချီးကို စက္ကူပတ်ကျွေးတာ တစ်ဝက်ကုန်မှသိတယ် အံ့ရောကွာ
Dear all. I know BBC have very accurate data especially on Political situation in Myanmar. So , if one of their repoter report this , how about alternate in-charge for that day broadcast ?
ဟုတ်ဟ ကုလားကအူခွေးကဆူနဲ့ငါတို့မြန်မာပြည်မှာနင်တို့ကုလားမျိုးတွေ မျိူးကန်းမှနားအေးမှာ...........
aye , min dot allah ga gaw.... bar lu myo lel? gyo tar lar?ahtee lar?ama lar? dar ma ma hoat gay lar? bel lo ponen zan lel?ayin ti ag load lite own. ma aye low ka lar yae.
ငါတို့ ဘုရားဂေါတမက သာကီဝင်မင်းမျိုးကွ မင်းပြောတဲ့ ဇာတ်နိမ့် ဗြမနတွေမဟုတ်ဘူး မသိဘဲစောက်ရမ်းမပြောနဲ့ ခွေးသား ၀က်မြေး ကြက်ယောက်ဖတွေ